Qophii tapha guutuu Oromiyaatiif taasisfamaa jiru
Qophii tapha guutuu Oromiyaatiif taasisfamaa jiru Featured
Taphni Guutuu Oromiyaa maqaa ammaa kana moggaafachuun dura Shaampiyoonaa Ispoortii Oromiyaa jedhamuun bara 1986 irraa kaasee waggoottan baay'eedhaaf adeemsifamaa tureera; hanga har'aattis adeemsifamaa jira. Maqaan kunis Mana Maree Ispoortii Oromiyaatiin jijjiiramuu akka danda'edha, kan hubatamu.
Tapha kanarratti Godinaaleefi Bulchiinsonni Magaalootaa sochi ispoortii taasisan keessatti walitti dhufeenya, jaalalaafi tokkummaa, akkasumas aadaafi duudhaa isaanii walirraa barachuufi wal-barsiisuu kaayyoo godhachuun waldorgomaa turaniiru.
Mootummaan Naannoo Oromiyaafi Biiroon Dhimma Dargaggootaafi Ispoortii Oromiyaas immaamataafi tarsiimmoo gama ispoortiin qabame daran milkeessuuf, “Oromiyaan burqaa qofa miti galaana atileetotaa ni taati”dhaadannoo jedhuun taphoota Guutuu Oromiyaa jedhamu kana gandaa kaasee hanga sadarkaa naannootti waggaa waggaadhaan adeemsisaa kan turaniifi jiraniidha. Taphichi baranas yeroo 24faf Amajjii 20 bara 2010 Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuutti kan adeemsifamu ta'uu Biiroon Dhimma Dargaggootaafi Ispoortii Oromiyaa ibseera.
Ittaanaan Ogganaa biirichaa Obbo Fissahaa G/Mikaa'eel tibbana ibsa kennaniin, taphiwwan Guutuu Oromiyaa baranaa kanarratti bulchiinsonni magaalootaafi Godinaaleen martuu hirmaachuuf qophii olaanaa taasisaa turuusaanii himaniiru.
Qophii kanaafs godinaaleefi bulchiinsonni magaalotaa ispoorteessitoota ciccimoo qabatanii gosawwan ispoortii ittiin hirmaataniin sadarkaa sadarkaadhaan dorgommaa akka turan ibsanii, tapha kanarratti waliigalaan bulchiinsota magaalotaa 18fi godinaaleen Oromiyaa 20 ta'an hirmaachuun kan dorgomaniidhaa jedhaniiru.
Tapha Guutuu Oromiyaa baranaas kan keessummeessu bulchiinsi magaalaa Bishooftuus qophii barbaachisaa maraa xumuruudhaan keessummootashee simachuuf guyyicha hawwiidhaan eegaa akka jirtu hubachuun danda'ameera.
Manni Maree Ispoortii Oromiyaas shaampiyoonicha sadarkaa sadarkaan gaggeessuuf bajeta qarshi mil. lamaa ol ramaduusaa kan ibsan Obbo Fissahaan milkaa'inasaaf hordoffiin walirraa hincitne taasifamaa jiraa jedhaniiru. Kaayyoon tapha kanaas Tapha Guutuu Itoophiyaa 6fa barana ji'a Bitooteessaa qopheesummaa naannoo Tigiraayiin; Maqaleetti adeemsifamurratti taphattoota ciccimoo Oromiyaa bakka bu'uun hirmaatan filuuf ta'uusaas beekameera.
Taphni Guutuu Oromiyaa kun bara 1986 yeroo jalqabaaf magaalaa Jimmaatti kan adeemsifame yoo ta'u, hirmaatonni godinaalee Oromiyaa 12 irraa bobba'aniifi atileetonni 500 ta'an gosoota ispoortii shaniin waldorgomuusaanii kan yaadatamuudha. Jimmis ofumaan qopheessuun bara sana shaampiyoonaa ta'ee ture.
Torban kana/This_Week 11240
Torban darbe/This_Month 97597
Guyyaa mara/All_Days 1436020